Livescribe Smartpen 3 Edition Black Review - Rule News
Livescribe Smartpen 3 Edition Black Review
Livescribe Smartpen The 3 ma waa qumman yahay. Lahaanshaha in ay smartphone a kula si ay u qoraan Pencasts ma u fiican yahay sida lagu qoro on qalab laftiisa, gaar ahaan haddii aad tahay degdeg ah.
Buuhoodle u dhexeeya stylus iyo qalin ah, Smartpen ah 3 Sidaas waxa qoray wargayska on warqad, laakiin qabsatay qoraalo iyo sawiro aad dijital la audio Added xidhan stroke aad
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Livescribe Smartpen 3 dib u eegis Edition Black: Qalinka 2.0” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Monday 7th March 2016 07.00 UTC
qalinka The uusan waxba iska badalin badan tan iyo war abuurashadoodii guul qalin ee 1938. Waxaan lahaa weelasha xooga leh in uu ka shaqeeyo meel, noocyada kala duwan ee khadkii iyo naqshado kubada Xog-, laakiin aasaas u shaqeeyo si la mid ah mar kasta waxay leedahay.
stylus ayaa muran la'aan waa horumar soo socda qalinka - qalin aan khad. Waayo, kuwo badan, Si kastaba ha ahaatee, waa tallaabo aad u fog, dhimmanna tactility qalinka on warqad iyo baaraandegaya waxa ugu fiican ee ku saabsan qalin a: qori karaa oo kaliya ku saabsan meel kasta oo aan qalab kasta oo gaar ah.
Pen The 2.0
LED waxay muujinaysaa in markii qalinka ku yahay, amraya, ku xiran smartphone ama kiniin ama marka diyaar u ah inay xubnuhu leh qalab cusub. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
nidaamka Livescribe The, kuwaas oo Smartpen ah 3 waxaa weeye qarnigii saddexaad, waa guriga kalabadhkeeda in laga yaabo kale oo muhiim ah ka mid stylus ama qalin ah.
Maxay aad heysato waa qalinka lagu eego oo uu dareensan yahay sida qalin, Sidaas waxa qoray wargayska on warqad leh tip qad ah iyo khad, sida biro kasta oo kale oo, laakiin waxa ay sidoo kale digitises scrawls aad bogga. Waxa aad warqad ku qoraan waxaa dhab ahaan mid hawlyari iyo qaab a digital, aan u baahan in la sawiro ama iskaan bogga.
camera ee dhammaadka qalinka, la qad ka dusin ku xusan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
camera A ee dhammaadka qalinka aqoonsan qaabka dhibic yar oo ku saabsan pages of warqad gaar ah si ay ula socdaan Livescribe mooshin. Waxaa loola jeedaa, ma shaqeyn doonaan on warqad kasta oo jirka, inkastoo sida qalin waxaa iska cad ma, laakiin waraaqaha Livescribe-socon waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan, notepads iyo buugaagta Moleskine, ama aad daabacan kartaa adiga kuu gaar ah la isticmaalayo printer laser ah.
Qoraallada waxaa synced u app Livescribe + on Android ama macruufka smartphone ama kiniin via Bluetooth, laakiin shuqullada iyo diiwaanka qalinka Hagidda ganaax kaliya ay u gaar ah, aad la micno ah ma aha inay ku xiran waa in aad smartphone waqtiga oo dhan in ay ka shaqeeyaan.
qoraalada qabtay noqon kartaa line-by-line saarka sida images, sida sanam ee bogga ama sida PDF ah iyo la wadaago via app kasta ama adeeg aad ku rakibtay on your smartphone ama kiniin.
Notes ka page inay baaraan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
app ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay trick ah ilaa ay gacmo qaab wax-u Pencasts: cajalado maqal ah ku xidhay in stroke qalinka aad. diiwaanka app wuxuu ka dhawaaqi via smartphone ama kiniin makarafoonka ee la dhisay-in, ama codbaahiyaha dibadda shidan galay godka headphones. app The ma awoodo si ay u qoraan taleefan ka dhigay on qalab socda app, laakiin isticmaali kartaa makarafoonka qaadista-up a si ay u qoraan ka phone kale.
Audio waxaa markaas timestamped in aad far, taasoo la micno ah in aad loo maqli karo si hufan waxa la duubay waqti aad u qoray eray gaar ah oo kaliya by siyoodba waxa on. Waxay ka dhigaysa leexiyo wareysi ama kulan qoraalo aad u badan si dhakhso ah by helitaanka u barta saxda ah ee lagu qoro isla. Waa ciyaaryahan fantastik ah.
la Pencasts dib ciyaaray karaa iyadoo la isticmaalayo app ama via PDF la audio gundhig ay gudahood. Si taas loo sameeyo si aad u baahan tahay in aad ku shuban PDF galay Player Livescribe ee - app web a - taas oo qayb ka ah faff a, laakiin waxa ay ka dhigan tahay qof kasta oo dib u ciyaari karo PDF ah la wadaago xataa haddii aanay kuwiisa ahayn qalinka Livescribe a.
la Pencasts dib ciyaaray kartaa gudahood Livescribe + app ama browser a. khad cagaaran qoray in ka badan erayada greyed-baxay sidii audio lagu duubay gaarayaa in. Siyoodba on Eray sababi si heer in lagu qoro. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Livescribe sidoo kale ma aqoonsi far. Its guul ku xiran tahay sida xun aad far waa. Waxaa soo jiidasho leh si sax ah anigaa aqoonsan doonaa markii aan diirada u qor si nidaam. Si kastaba ha ahaatee, ay bilowdo inay halgan sidii scrawls far aan marka qoraal xawaare, oo aan si caadi ah ahay marka la waraysanayo qof.
Farqiyada u dhexeeya macruufka iyo Android
app The Android waa qof qaraabo ah oo masaakiinta ah ee app macruufka, daayacay maqan ah feature automatic soo, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si wax ku ool ah ka codaysay qoraalada ay Livescribe la buug ee Evernote. Waxaad u diri kartaa qoraalada qaab images, PDFs ama Pencasts in Evernote ka app Livescribe Android, laakiin aad leedahay si aad u gacanta samayn.
Waxa kale oo xusid mudan in qoraalada waxaa synced dhexeeya qalabka kala duwan socda ee app Livescribe +, laakiin ma Pencasts, kaas oo ku farxayaa in ay qalabka ay ku diiwaan on haddii la wadaago via siyaabo kale.
Tani waa version labaad ee Smartpen ah 3 Waxaan imtixaannay. Midkii kowaad wuxuu u, edition Moleskin ah, dhintay ka dib markii uu kululaado. Waan ku eedeeyay isticmaalaya Qualcomm Quick Charge xeedho USB socon (qalinka ku iman mayso ay adabtarada awood u gaar ah), kaas oo ahaa wanaagsan.
Waxaan ku rid bac aan oo u tegey kulan, laakiin markii aan u baxay si ay u isticmaalaan 30 daqiiqo ka dib waxaa qaban oo aad u kulul in ay la tacaalaan. Just ka badan 30 daqiiqo ka dib waxaa la qaboojiyey off, laakiin wuxuu ahaa gebi ahaanba dhintay.
hannaankii xakamaynta iyo dhibic ka mid ah buug Moleskin Livescribe. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Kontoroolha for garab qalinka, duubo, pausing iyo joojinta Pencasts, iyo sidoo kale bilowday, Johny ama calaamadeynta qoraalada yihiin barbaro sida walxood bogagga buugayga ah - iyaga ka jaftaa la qalinka loo isticmaalo
The dhammaadka aan qalinka waa stylus capacitive a, qarinaya dekedda microUSB ah, laakiin ma uusan sii joogi in dhamaadka aad si ammaan ah
Sawir shaqada qalinka kaliya iyo sidoo kale qoraalada ku qoran – xirfaddaada farshaxan loo baahan yahay
Livescribe Smartpen The 3 ku yimaado daydo kala duwan, oo ay ku jiraan a dib edition Black cusub oo miisaan qaybinta ka fiican iyo dhista yar slimmer. Livescribe Smartpen The 3 Black Edition kharash £ 120 iyo yimaado la-style Midab yar buugayga 50-sheet iyo hal midab qad.
notepads Livescribe-socon bilaabi at dhan £ 3 kasta oo refills for qalinka, £ 1 kasta.
Livescribe Smartpen The 3 ma waa qumman yahay. Lahaanshaha in ay smartphone a kula si ay u qoraan Pencasts ma u fiican yahay sida lagu qoro on qalab laftiisa, gaar ahaan haddii aad tahay degdeg ah. app The Android aan diyaar u yahay PrimeTime weli iyo xaqiiqda ah in version ugu horeysay ee la ii soo diray kulaylku iyo ku dhintay ayaa la walwal.
Laakiin nabadraadinta digitizing ee qoraalada anigu ma aan khalad karaa. Qalinka ayaa si fiican u tarmaa scrawls aan, iyo marka dhoofiyo Evernote waxaa loola jeedaa waxaan leeyahay nuqul ka mid ah qoraalada aan meel kastoon ahay. Pencasts ayaa sidoo kale dardar qoraal dhammaad ma leh. qalinka waa qalab qoraal hufan, gaar ahaan Black Edition, kaas oo uu dareensan yahay in ka badan sida qalinka weyn oo leh miisaan qaybinta wanaagsan.
Waxaa had iyo jeer waxay yeelan doonaan racfaan Misbaax laakiin qof kasta oo ka dhiga qoraalada, gaar ahaan halka lagu qoro audio, waa qalab aad u wanaagsan.
Iidooyinka: qoraalada Digital ka warqad, dareemeysaa qalin, Sidaas waxa qoray wargayska sida qalin, cross-madal, syncs audio in qoraalada ku qoran, ka shaqeeya iyada oo aan la lifaaqan phone a, Ilo badan oo warqad socon, aqoonsi far
Arrrimaha: app Android aad u ma horumariyo, qaali, waxay u baahan tahay warqad gaar ah, qalinka ugu horeysay ku guuldareysatay
dhamaadka stylus caag The unclips inuu u muujiyo microUSB amraya dekedda. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
California guddi dib u eegis sayniska ansixiyay daraasad ku ...
Apps, Qodobka, Qalab, Dib u eegida, Technology
← 10 Inta badan sunta Masaska [Listverse] Maskaxda ee dadka ka walaacinaya yaabaa Miyaydnaan duwan Adduunka →